Zvekuoma kuoma bvunzo - Yuyao Jera Line Fitting Co.
Kuoma kuyera bvunzo kunoshandiswa kuve nechokwadi chekuti zvigadzirwa kana izvo zvinhu zvinogona kuramba zvemagetsi kukanganisa panguva yekumisikidza kana kushandisa nezvimwe zvinoenderana zvigadzirwa. Ndiyo imwe yemakesi akakosha ekuona hunhu hwezvinhu, kuomesa bvunzo kunogona kuratidza mutsauko mukuumbwa kwemakemikari, chimiro chetishu uye tekinoroji yekurapa yezvinhu.
Chinangwa chikuru cheyedzo yekuomesa kuona kugona kwezvinhu zvekushandisa kwakapihwa. Zvakajairika zvinhu simbi, plastiki, ribhoni ine kuramba kwayo deformation, kukotama, kutsika mhando, kusagadzikana, kuboora.
-Fiber optic inosunga
-High voltage mutsetse fittings
-Low voltage shear musoro bhaudhi makumbo uye zvinobatanidza
-Kuderera kwemagetsi ABC inosunga
-Low voltage tambo yemuchadenga mabhureki
-Fiber optic mabhokisi ekuparadzira
-Fiber optic donhwe tambo
Isu tinoshandisa manual rockwell hardness yekuyedza muchina kuyedza ferrous simbi zvigadzirwa uye zvigadzirwa, zvakare shandisa kumahombekombe kuomarara kuyedza muchina kuyedza epurasitiki uye ribhoni zvinhu.
Isu tinoshandisa zvekushandisa pakuyedza kwedu kwezuva nezuva kwehunhu, kuitira kuti mutengi wedu agamuchire zvigadzirwa zvinosangana nezvinodiwa zvemhando yepamusoro. Yedu murabhoritari yemukati inokwanisa kuenderera dzakateedzana dzakadai dzinoenderana mhando mhando bvunzo.